Indawo entle yaseWaterfront ePerth
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguJefferson
Yonwabela ubuhle beLake Mississippi ePerth, ekwimizuzu engama-45 ukusuka eOttawa. Indlu yethu entle ephambi kwamanzi, ebekwe kwindawo ehlala isaziwa iMcCreary's Beach Resort, ikwakumganyana nje ongephi ukusuka kwimbali kunye nedolophu entle yasePerth. Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide ibonelela ngeNdawo yokuDla yeBhola yeBhola yeBhola ekhatywayo yaselwandle / iiNkundla zeTennis Iziko lokuPhila / Indawo yokuLoba indawo yoKulotywa kweGym
Yonwabela ubuhle beLake Mississippi ePerth, ekwimizuzu engama-45 ukusuka eOttawa. Indlu yethu entle ephambi kolwandle, ebekwe kwindawo ehlala isaziwa iMcCreary's Beach Resort, inamagumbi okulala ama-2 kunye negumbi lokuhlambela elinye.
Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide ibonelela: Ulwandle olulungisiweyo olunesanti, amadama okuqubha ashushu, Ukusetyenziswa okungapheliyo kwe-kayak, iphenyane, iibhodi zokubheqa, iTennis, ibhola yomnyazi, umthambo nokunye okuninzi.
Irenti yendlu engasemanzini ibandakanya ezi mpawu zilandelayo kunye nokusetyenziswa kwe:
1. Ikhitshi eligcweleyo elinesitovu segesi, ifriji, imicrowave.
2. Ulala ngokukhululekileyo kubantu aba-3-5
3. Igumbi lokulala elikhulu linebhedi enkulukazi
4. Igumbi lokulala lesibini linebhedi enkulu (i-1 kabini kunye ne-1 eyodwa)
5. I-air-conditioning ephakathi / ubushushu / ifeni kunye neziko lombane
6. Igumbi lokuhlala elikhulu elivulekileyo eline-65 intshi ye-LED flat screen kunye neNetflix
7. Umgodi womlilo wobuqu (kubandakanywa neenkuni zasimahla)
8. ukusetyenziswa unlimited Wi-Fi
9. Idesika enkulu eyandisiweyo enepatio
10. I-BBQ grill
Ekuphela kwento oyifunayo kukuzisela ibhedi yakho, imiqamelo, iitawuli, izinto zangasese.
Umbuki zindwendwe ngu- Jefferson
Ndiza kudibana nawe kwaye ndikubonise ngeenxa zonke. Unokufumana uncedo kwiziko lokwamkela.